Windows chengetedzo kunyangwe mune mubvunzo | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft yeWindows operating system security yagara iri munzvimbo inoonekera, asi ikozvino kunyangwe nekutenda kuboka revanogedzera vanonzi Shadow Brokers, avo vakazivisa kuti vakawana zvinyorwa zveNSA uye kubva kwavari vakakwanisa kutora ruzivo rwakakosha uye zvishandiso zvinoshandiswa nesangano revasori North America. Pakati pezvishandiso izvi, vamwe kunosora maWindows system.
Microsoft yafanirwa kuuya pamberi izvi zvisati zvaitika uye kujekesa kuti vachadzidza mamiriro acho ezvinhu kuti vazive maitiro ekuita kuti vabatsirike vatengi vavo ... Isu takatombozviona izvi pane dzimwe nguva, kuti mamwe maturusi ekurwisa erudzi urwu rwemasangano anotengeswa sei pawebhu yakadzika, uye ikozvino, mushure mekuyedza uku Kutengesa, ivo vakaburitsa kodhi yavo pane inozivikanwa GitHub portal kuitira kuti munhu wese agone kuwana maturusi aya kukanganisa kukanganisa kweWindows.
Iwo maturusi akawanikwa kwete chete anokanganisa Windows, asiwo iyo SWIFT emabhangi masisitimu ayo anoshandiswa kuendesa mari pasi rese. Kunyangwe akawanda maturusi uye zviwanikwa zvatoonekwa nematurusi ezvazvino ekuchengetedza, zvimwe zvinogona kukanganisa kusagadzikana kwekare kana kusazivikanwa muWindows. Naizvozvo chinhu icho chinogona kuve chakakomba.
Microsoft yagadzira zvimwe zvirevo zvisina musoro. Kune rimwe divi, rakaramba kuti bhuku iri rinokanganisa vashandisi varo, richiti michina yeNational Security Agency haikanganisa Windows. Hapana chimwe chiri kumberi kubva pachokwadi, asi zvakadaro ... Kune rimwe divi, Phillip Misner, maneja wezvekuchengetedza wekambani yeRedmond akataura kuti ivo vari kutogadzira zvirongwa zvekudzivirira pamaitiro gumi nemaviri akatsanangurwa neShadow Brokers ... Saka? Kana zvikasakanganisa vashandisi veWindows, ndinoshamisika kuti sei vari kuvandudza kuzvidzivirira uku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Windows » Windows chengetedzo yakatonyanya mubvunzo
Edward wePort akadaro
Heh heh, ava vanobva kuMS, vanotaridzika semutungamiriri wenyika yangu (Paraguay), ha ha ha ... Muchirevo chimwe chete iye haakwanise kubatana ... Izvo zvinongozvipesana pache ha ha ha ... Muchidimbu, zvematongerwo enyika, ndezvematongerwo enyika (isu tatoziva hunyengeri hwayo hwese).
Pindura Eduardo del Puerto
shandisa yemahara software mhinduro
Zvakanaka, izvi zvinogona kuitika mune chero komputa system, hongu, asi muBSD kana linux inokwana zana kakachengeteka, ndinonzwa ndakachengeteka neOpenSUSE, ndinonzwa = ne fedora, ubunto, Debian etcc ... Kana chero Bsd , Ini ndinongoshandisa windows kune mumwe mutambo uye pasina internet.
Linux 4.11 RC7 Kuburitswa!